PressReader - Kwayedza: 2017-11-10 - Mitengo yefeteraiza yokwira
Kwayedza - 2017-11-10 - Nhau Dzevarimi - Muchaneta Chimuka
Semuenzaniso, 50 kg yefeteraiza - iyo yaitengwa ne$26 mwaka wadarika - parizvino iri kuita $38 apowo mbeu yechibage yaiita $5 pa2 kg yakakwira kuenda pa$7.
Mune zvimwe zvitoro, 25 kg yefeteraiza yemhando yeAmmonium Nitrate iri kutengeswa ne$17,50 kozoti 25 kg yembeu yechibage iri kuita $70 - $80.
Zvakadai, mutauriri weindasitiri yemakambani anogadzira feteraiza (Fertilizer Industry) - VaTapiwa Mashingaidze - vanoti kumwe kudhura kwezvekushandisa kuri kukonzerwa nezvakasiyana.
“Hongu, takatambira zvinyunyuto kubva kuvatengi zvekuti zvinhu zviri kuramba zvichikwira, zvikuru sei fete- raiza. Kune zvimwe zvinhu zvakakwira mitengo zvakadai semidziyo yekupekera feteraiza nokudaro mitoro yese iyi yava kuwanikwa ichiturirwa kuvatengi. Feteraiza zhinji yatiri kugadzira iri kuenda kuzvirongwa zveHurumende zvakadai seCommand Agriculture uye yose iyi ine mitengo yakangofanana,” vanodaro.